Muxuu soo kordhiyay socdaalkii Madaxweyne Siilaanyo ee gobolada Awdal iyo Gabilay | Somaliland.Org
July 29, 2011	Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo Xilka madaxtinimada dalka hayay muddo sannad ah, waxa uu mar kale ummadda reer Somaliland ee codka aqlabiyadda ah ku doortay ku qanciyay inay dawladiisa kula xisaabtamaan waxqabad oo ay meel iska dhigaan inay noqdaan kuwo u qabaanna siyaasiyiinta danaha gaarka ah leh ee mansab ku dirirka ah.
Si uu Madaxweynuhu u darso inuu haysto kalsoonida shacbiga, waa sababta dhalisay inuu lug ku dhex socdo magaalada Gabilay masaafo ku dhow 1-Km iyo badh galabnimaddii Arbacadii oo si weyn loogu soo dhaweeyay wefti uu hoggaaminayay oo ka soo kicitimay magaalada Boorame ee xarunta Gobolka Awdal.
Madaxweyne Siilaanyo waxa uu si dhego furan u dhegaystay aragtidii iyo garnaqsi ka soo yeedhay odayaasha iyo waxgaradka Gobolka Gabilay oo uu gelinkii hore ee khamiistii kulan balaadhan kula yeeshay magaalada Gabilay. Madaxweynuhu waxa uu Odayaasha hoga tusaaleeyay inay xukuumadda kula xisaabtamaan wixii horumar ah ee gobolku baahida weyn u qabo, hase yeeshee aanay wakhti badan iska gelin inay xukuumadda culays ku saaraan in ay beel ahaan helaan xilal badan.
Waxa uu madaxweynuhu uga mahad celiyay dadweynaha gobolka Gabilay kaalintii ay ka geysteen isbedelkii dalka ka dhacay ee doorashadii June-tii ina dhaaftay.
Md. Axmed Siilaanyo waxa kale oo uu ummadda reer Somaliland dareen siiyay sida aanu ugu faraxsanayn shirar beeleedyada bilihii la soo dhaafay lagu qabanayay magaalooyinka dalka waxaanu sheegay inaanay is qabanayn qaranimo iyo beelnimo.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu awoodi karayay inuu soo dhiso xukuumad balaadhan oo cid kastaaba ka muuqato hase yeeshee uu taasi u yeeli waayay danaha qaranka oo uu soo dhisay xukuumad kooban oo tayo leh, taasina waa waxa uu u balan qaaday inuu diyaar u yahay in shacbigu la xisaabtamaan.
Weftigii Madaxweynuhu waxa kale oo ay soo booqdeen magaalada Ganacsiyeedka Wajaale oo ka tirsan Gobolka Gabilay waxaanu madaxweynuhu u balan qaaday inay xukuumaddiisu wax ka qaban doonto waddo xumida la daadegtay magaaladaasi oo xudun u noqotay ganacsiga dalka isla markaana halbowle u ah dakhli maalmeedka cashuuraha dalka.
Madaxweynaha waxa kale oo uu muuneeyay Jaamacadda Cammuud oo ah tii u horaysay ee dalka laga furay oo uu ka qeyb galay Arbacadii dufcaddii 10-aad ee ka qalin jabisay jaamacadaasi oo ay ka aflaxeen 192 arday sannadkan oo wax ka bartay lix kuliyadood. waxaanu sheegay inay qiime weyn ugu fadhido inuu arko dugsigii sare ee uu ka baxay oo ah jaamacad.
Waxa kale oo uu madaxweynuhu Magaalada Boorame kulan balaadha kula yeeshay waxgaradka iyo madax dhaqameedka Gobolka Awdal, waxaana kulan socday saacado ay isku laab xaadheen iskana waraysteen sidii loo ilaalin lahaa nabadgelyada iyo wada jirka ummadda reer Somaliland.
Si kastaba arrintu ha ahaatee waxa darruuri ah in kolka muddo la joogaba uu Madaxweynuhu cagta soo mariyo gobolada dalka si uu indhihiisa ugu soo arko sida dadweynuhu ugu iimaan qabo xukuumadiisa, waxaanay taasi u fududeynaysaa inuu si fudud u helo wadciga dhabta ee gobolada dalka yaala iyo galdaloolooyinka maamulkiisaba.
Previous PostUDUB oo Guddi u saaray sidii waan-waan looga dhex abuuri lahaa Garabada ku hirdamaya Xisbiga UCIDNext PostMaamulka Gobolka Salal oo Saylac kula kulmay saraakiil ka socday dalka Jabuuti	Blog